Berbera:-Waa magaalada ugu nadaafada wanaagsan Marka loo eego somaliland Waxaana sabab u ah MAAMULKA gacanta ku haya: W/Q: Farhan Mohamed Sultan Nur (Rakad) | Somaliland Today
← sahra halganeey dee shacab baad tahay quuxaaga ha ka dheerayn
Tijaabo doorasho hordhac ah oo loo qabtay 3da xisbi qaran →
Berbera:-Waa magaalada ugu nadaafada wanaagsan Marka loo eego somaliland Waxaana sabab u ah MAAMULKA gacanta ku haya: W/Q: Farhan Mohamed Sultan Nur (Rakad)
Horumarka wadankaaga,gobolkaaga wuxuu ku xidhan yahay kolba maamulka gacanta ku haya……………………………./
Marka hore ILAAHAY BAA MAHAD LEH isagoo inoo suuro galiyay in aynu soo gudbino wixii aqoonteena iyo aragtideena ah intaa ka dib waxaan salaamayaa dhamaan umada reer Somaliland meelkasta oo ay joogaan iyo bahda saxaafada ee ku hawlan siday cidkasta oo somaliland ah u soo gaadhsiin lahaayeen dhacdooyinkii u dambeeyay ee dalka ka socday saacad saacad, iyo sikin sikinba . iyagoon ahayn dad faaido doona laakin u shaqayeeya si volunteer ah ama bilaasha.
Berbera waa magaalada laf dhabarta u ah dhaqaalaha somaliland waana magaalad kaliya ee uu dhaqaalaha somaliland ka soo xaroodo, waa magaalo dhisme ahaan aan waynayn laakin da,ahaan wayn taas oo ah magaalo xeebeed ay ku taal dekada ugu qaalisan somaliland/Somalia uguna socodka badan marka loo eego dekadaha ku yaal Somalia waa dekad qiimo badan ka ag leh dawlada badan oo caalamka ka mida sida wadamada jaarka oo aad u daneeya dekada berbera.
Berbera waa magaalo ka mida magaalooyinka ugu shaqada badan somaliland waa magaalo dadku habeen iyo maalinba la shaqaysto.
Berbera waa magaalo taariikh ay ku duugan tahay taas oo taas oo dhaqaalaha ka soo baxaa uu si joogtaa ugu dhaafo magaalooyinka kale sida Hargeisa iyo burco iyo boorama.
Berberi waa magaalo aynu ka dhigan karno magaalada ganacsiga somaliland.
Waxaan xooga saari doonaa oo aan qalinka u qaatay sida wanaagsan ee ee loo ilaaliyo nadaafada guud ee magaalada taas oo uu hormood ka yahay maayarka iyo golihiisa deegaan iyo shaqaalahooduba.
Berbera Waa magaalo nadaafad ahaan ah magaalad ugu nadaafada wanaagsan somaliland inkastoonan somaliland wada arag hadana inta aan arkay waxa ay ka tahay magaalada ugu nadaafada wanaagsan uguna qaabaysan sida caalamka waa marka laga hadlayo ROAD MAP magaalada.
Waxyaalaha igu kalifayn inaan qalinka u qaato magaalada Berbera waxa ka mida
1: Markaan arkay nadaafada wanaagsan ee magaalada ayaa waxaan jeclaystay maamulkooda iyo bulshadooda oo si habsamiya uga shaqeeya nadaafada guud ee magaalada.
2: Markaan ARKAY shaqaalaha ka shaqeeya nadaafada oo shaqaynaya MAALINTII CIIDAL ADXA
Waxay igu noqotay layaab markaan arkay shaqaalaha ka shaqeeya nadiifinta magaalada oo MAALINTII ciidul adxa shaqaynaya may ahayn maalin la shaqeeyo laakin waxay ka jeclaadeen inay magaalada nadiifiyaan oo waxay ku ciideen inay dhulkooda nadiifiyaan taasina waa mid ka mida shaqo wanaaga shaqaalaha dawlada hoose ee Berbera.
Waxaan leeyahay Maamulka dawlada hoose ee Berbera shaqadii iyo xilkii laydiin dhiibay waxaad u gudateen si habsami la,aana waxaanad u gudateen si sharaf badan inkastoon waxwalba aan la wada qaban Karin maalin kaliya hadana waxa loo qabtaa siday u kala muhiimsan yihiin waxaanan filayaa in inta hadhsan ay dhamaystiri doonaan.
Maamulkasta wuxuu guulaystaa marka ay shaqaalihiisu yihiin kuwo u daacada shaqada loo igmaday Dawlada hoosana waxaan leeyahay shaqaalihiinu waa ay guteen shaqadii aad u igmateen.
Maamulkasta wuxuu hoos u dhacaa marka ay shaqaalahoodu gudan waayaan waajibaadkii shaqo ee loo igmaday si kasta oo ay tahay waa ay jiraan magaalooyin waaweyn oo ka mida somaliland oo la ciir ciiraya nadaafad xumo iyo qashin sida Hargiesa oo maanta meelkasta yaalo qashin iyo daryeel la,aanta dawlada hoose oo ku fashilantay inay hagaajiyaan nadaafada Hargiesa.
Waxaan odhan lahaa maamulka dawlada hoose ee BERBER muu qasaarin wax qabadkiinii aad qabateen manuu dhamaan ee halkaa ka sii wada oo ha ka caajisina waxa idiin hadhay hawlo badan oo kala duwan waxaanad xooga saartaan sidii loo dhisan lahaa meelaha STRATEGY AH IYO meelaha dawlada ka ag dhawdahay.
LA SOCO QAYBAHA DAMBE OO KU SAABSAN BERBERA .